Dagaal u dhaxeeyay Galmudug & Puntland oo ka dhacay Gobolka Mudug – XAMAR POST
Dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiyo oo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug, ayaa wuxuu ka dhacay meel ku dhaw deegaanka Godad ee Bariga Gobolka Mudug.
Dagaalkaan ayaa la xiriira dilal todobaadkan ka dhacay isla Gobolka Mudug oo ay gaysteen maleeshiyaad dhanka Puntland ka soo jeeda, waxaana taasi ay keentay maleeshiyaad kale oo Galmudug ka soo jeeda xalay fal aargoosi ah inay u aadeen dhanka Puntland.
Xalay saqdii dhexe ayaa la sheegay labada maleeshiyo beeleed inuu dagaal ku dhexmaray duleedka deegaanka Godad, dagaalkaasi oo mar kale saaka laga maqlay duleedka deegaankaasi, waxaana jira Khasaare dhimasho iyo dhaawac oo maleeshiyaadka soo kala gaaray.
Inta la xaqiijiyay saddex ruuxu oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa geeriyootay, halka dhaawac ay yihiin 7 ruux oo isla dhinacyadii dagaalamay ah.
Isbitaalka Magaalada Gaalkacyo ee dhanka Koonfureed ayaa la soo gaarsiiyay dhaawacyada saddex ruux oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii dagaalamaayay, halka Afar ruux kalena la sheegay in loo qaaday dhanka Isbitaalka Waqooyiga Gaalkacyo.
Suxufiyiinta ku sugan Magaalada Gaalkacyo ayaa soo sheegaya in xaaladda duleedka deegaanka Godad hadda ay tahay mid degan, balse ay jiraan maleeshiyaad kale oo qaab gurmad ah ugu tagaayo dhinacyada halkaasi isku haya.
Gobolka Mudug muddooyinkaan dambe waxaa ka taagnaa xiisada la xiriirta dilalka salka ku haayo aanooyinka qabiilka ee u dhaxeya maleeshiyo beeledyadan.